အခွန်ရှောင်တဲ့ ဆိုင်တွေကို တိုင်တန်းမယ်ဆို ယောင်းရရှိမယ့် အရာက ? – For her myanmar
အခွန်ရှောင်တဲ့ ဆိုင်တွေကို တိုင်တန်းမယ်ဆို ယောင်းရရှိမယ့် အရာက ?
Posted on May 9, 2019 Author Wathun	Comment(0)
ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးရင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ ဘေလ်ကို သေချာလိုက်စစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်.. 😛
ယောင်းတို့ရေ… စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ သွားစားလို့ ပိုက်ဆံရှင်းပြီဆိုရင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းလေးတွေ ကပ်ပြီး လာပေးတယ်ဟုတ်? ဒီတံဆိပ်ခေါင်းလေးတွေဟာ ကျသင့်တဲ့ အခွန်ငွေကို တွက်ချက်ပြီးမှ ကပ်ပေးတယ်ဆိုတာတော့ ယောင်းတို့ သိပြီးကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်နော်.. တကယ်လို့များ ကျသင့်တဲ့ အခွန်အတိုင်း ဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေကို မကပ်ပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီစားသောက်ဆိုင်က အခွန်ရှောင်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပေးလိုက်ရပြီး သူတို့က အခွန်ရှောင်တယ်ဆို ဘယ်တရားမလဲနော်.. ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်လို့ရလဲ?
တိုင်လို့ ရပါတယ် ယောင်းရေ… တိုင်ရင် အလုပ်ရှုပ်ရုံပဲ ရှိမှာပေါ့.. ကိုယ်တောင် အလုပ်ပိုသွားသေးတယ်လို့ရော တွေးနေပြီလား? တကယ်တော့ အခွန်ရှောင်တာကို မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးကို သတင်းပေး တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့အတွက်လည်း ဆုကြေး ရှိပါသေးသတဲ့… ဒီအကြောင်းလေး ယောင်းတို့ကို ပြောပြမယ်နော်…
Related Article >>> ငွေကြေးစီမံမှု နယ်ပယ်မှာ ယောင်းအတွက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်လဲ? (၂)
တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြေစာ ဒါမှမဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထား (ဘေလ်စာရွက်ပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်) တွေကို ယောင်းတို့ကို ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်း အဲဒီပေါ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျသင့်အခွန်အမှတ်တံဆိပ် နှိပ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင် အခွန်ရှောင်တဲ့ဆိုင်က သူရှောင်လိုက်တဲ့ အခွန်ငွေရဲ့ ၁၀၀% (ရှင်းအောင်ပြောရရင် သူရှောင်လိုက်တဲ့ အခွန်ရဲ့ ၂ဆ) ကို ဒဏ်ကြေးဆောင်ရမှာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ယောင်းတို့ ညစာကို စားသောက်ဆိုင်မှာ စားတဲ့အတွက် ရှင်းလိုက်ရတဲ့ ငွေတန်ဖိုးက ၁၀၅,၀၀၀ ထားကြပါစို့..
ညနေစာအတွက် ကျသင့်ငွေက ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အခွန်က ၅၀၀၀ ပါ။
အဲ.. အဲဒီမှာမှ ဘေလ်ရှင်းတဲ့အခါ ဘေလ်စာရွက်ပေါ်က အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း စုစုပေါင်း တန်ဖိုးက ၁၀၀၀ ပဲရှိနေတယ်ဆိုရင် ကျိန်းသေပြီ ၄၀၀၀ ဖိုး အခွန်ရှောင်ပြီပေါ့ ဟုတ်?
ဒါဆိုရင် အခွန်ရှောင်တဲ့ ဆိုင်က ရှောင်လိုက်တဲ့ အခွန်တန်ကြေး ၄၀၀၀ အပြင် ဒဏ်ကြေး ၄၀၀၀ ။ စုစုပေါင်း ၈၀၀၀ ဒဏ်ကြေး အတပ်ခံရမှာပါ။
ဒီ ၁၀၀% ဆိုတဲ့ ပမာဏအပြင် အခွန်ရှောင်တဲ့သူဟာ ဘဏ္ဍာရေး တစ်နှစ်အတွင်း ပျက်ကွက်တဲ့ အကြိမ်ရေအလိုက် ဒဏ်ကြေးတွေလည်း ဆောင်ရဖို့ ရှိပါတယ်။
ပထမအကြိမ် အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုရင် – ၂သိန်း
ဒုတိယအကြိမ် အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုရင် – ၅ သိန်း
တတိယအကြိမ် အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်တယ်ဆိုရင် – ၇သိန်း နဲ့
တတိယအကြိမ်နောက်ပိုင်း အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင် တစ်ကြိမ်ကို -၁၀ သိန်း နှုန်းစီ နဲ့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ကြရမှာပါ။
အဲ့တော့ အပေါ်က အခွန်ရှောင်တဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီဆိုင်က ခုမှ အတိုင်ခံရတယ် ဆိုကြပါစို့.. ဒါဟာ သူ ပထမအကြိမ် အခွန်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်တာမို့ အပိုဒဏ်ကြေး ၂သိန်း ထပ်ဆောင်ရပါမယ်။ အဲ့တော့ စုစုပေါင်း အခွန်ရှောင်တဲ့အတွက် ဆောင်ရတဲ့ ဒဏ်ကြေးက နှစ်သိန်းရှစ်ထောင် (၂၀၈၀၀၀)ပေါ့… (ဒုတိယအကြိမ်ဆိုရင် ငါးသိန်း ရှစ်ထောင်ဖြစ်သွားမယ်၊ တတိယအကြိမ်ဆိုရင် ခုနစ်သိန်းရှစ်ထောင် ဖြစ်ပြီး တတိယအကြိမ် နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ ၁၀သိန်း ၈ထောင်စီ ဖြစ်သွားမှာပါ။) ဒီထိ နားလည်သေးတယ်ဟုတ်?
Related Article >>> ငွေကြေးစီမံမှု နယ်ပယ်မှာ ယောင်းအတွက် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနိုင်လဲ။
အဲ.. အဲဒီမှာမှ ယောင်းက အခွန်ရုံးကို သက်သေအထောက်အထားအပြည့်အစုံနဲ့ တိုင်တဲ့သူဆိုပါစို့… ဥပဒေအရ ယောင်းတို့ ရရမယ့် ဆုကြေး (ခံစားခွင့်)တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆုကြေး ပမာဏက အခွန်ရှောင်တဲ့သူ ဆောင်ရတဲ့ ဒဏ်ကြေးရဲ့ ၁၀% ပါ။
အဲ့တော့ အပေါ်က စားသောက်ဆိုင်ကိစ္စပေါ်မှာပဲ ထပ်တွက်ကြည့်ရအောင်.. စားသောက်ဆိုင် ပေးလိုက်ရတဲ့ ဒဏ်ငွေက ၂၀၈၀၀၀ ဆိုရင် ယောင်းရမယ့် ပမာဏက ၂၀၈၀၀ ပါ။ တကယ်လို့များ ယောင်းက အခွန်ရှောင်တဲ့ ဆိုင်တစ်ခုခုကို တိုင်ချင်တယ်ဆိုပါစို့.. အဲဒီဆိုင်ရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ရုံးတွေမှာ ဘေလ်စာရွက်နဲ့အတူ သွားပြီး သတင်းပို့လို့ရပါတယ်။ သတင်းပေးသူဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အစိုးရကိစ္စမှတစ်ပါး ဘယ်သူမှ သိခွင့်မရှိ၊ ဖော်ပြခွင့် မရှိပါဘူး။ စိတ်ချလက်ချသာ ပြေးတိုင်လိုက်ပါ 😛 နောက်တာ နောက်တာ… 😀
ကဲ.. ဒါဆို နိုင်ငံကြီးသား ပီသစွာနဲ့ပဲ အခွန်ကို တိတိကျကျ ဆောင်ကြသလို အခွန်ရှောင်တဲ့သူတွေကို လိုက်တိုင် အဲလေ အခွန်ရှောင်ခြင်းကိုလည်း လက်မခံကြပါနဲ့လို့…
ဒီဆောငျးပါးဖတျပွီးရငျ အခှနျတံဆိပျခေါငျးနဲ့ ဘလျေကို သခြောလိုကျစဈတော့မယျဆိုတာ သိနတေယျ.. 😛
ယောငျးတို့ရေ… စားသောကျဆိုငျ တဈဆိုငျဆိုငျမှာ သှားစားလို့ ပိုကျဆံရှငျးပွီဆိုရငျ အခှနျတံဆိပျခေါငျးလေးတှေ ကပျပွီး လာပေးတယျဟုတျ? ဒီတံဆိပျခေါငျးလေးတှဟော ကသြငျ့တဲ့ အခှနျငှကေို တှကျခကျြပွီးမှ ကပျပေးတယျဆိုတာတော့ ယောငျးတို့ သိပွီးကွပွီလို့ ထငျပါတယျနျော.. တကယျလို့မြား ကသြငျ့တဲ့ အခှနျအတိုငျး ဒီတံဆိပျခေါငျးတှကေို မကပျပေးဘူးဆိုရငျ အဲဒီစားသောကျဆိုငျက အခှနျရှောငျတယျလို့ သတျမှတျလို့ ရပါတယျ။ ကိုယျကတော့ ပေးလိုကျရပွီး သူတို့က အခှနျရှောငျတယျဆို ဘယျတရားမလဲနျော.. ဒါဆို ဘယျလို လုပျလို့ရလဲ?
တိုငျလို့ ရပါတယျ ယောငျးရေ… တိုငျရငျ အလုပျရှုပျရုံပဲ ရှိမှာပေါ့.. ကိုယျတောငျ အလုပျပိုသှားသေးတယျလို့ရော တှေးနပွေီလား? တကယျတော့ အခှနျရှောငျတာကို မွို့နယျအခှနျဦးစီးဌာနမှူးကို သတငျးပေး တိုငျကွားမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့အတှကျလညျး ဆုကွေး ရှိပါသေးသတဲ့… ဒီအကွောငျးလေး ယောငျးတို့ကို ပွောပွမယျနျော…
Related Article >>> ငှကွေေးစီမံမှု နယျပယျမှာ ယောငျးအတှကျ ဘယျလိုအလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှေ ရှိနိုငျလဲ? (၂)
တညျဆဲဥပဒအေရ ပွစော ဒါမှမဟုတျ ငှလေကျခံရရှိကွောငျး အထောကျအထား (ဘလျေစာရှကျပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ) တှကေို ယောငျးတို့ကို ပေးလိုကျပမေဲ့လညျး အဲဒီပျေါမှာ သတျမှတျထားတဲ့ ကသြငျ့အခှနျအမှတျတံဆိပျ နှိပျပေးဖို့ ပကျြကှကျမယျဆိုရငျ အခှနျရှောငျတဲ့ဆိုငျက သူရှောငျလိုကျတဲ့ အခှနျငှရေဲ့ ၁၀၀% (ရှငျးအောငျပွောရရငျ သူရှောငျလိုကျတဲ့ အခှနျရဲ့ ၂ဆ) ကို ဒဏျကွေးဆောငျရမှာပါ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ယောငျးတို့ ညစာကို စားသောကျဆိုငျမှာ စားတဲ့အတှကျ ရှငျးလိုကျရတဲ့ ငှတေနျဖိုးက ၁၀၅,၀၀၀ ထားကွပါစို့..
ညနစောအတှကျ ကသြငျ့ငှကေ ၁၀၀,၀၀၀ ဖွဈပွီး အခှနျက ၅၀၀၀ ပါ။
အဲ.. အဲဒီမှာမှ ဘလျေရှငျးတဲ့အခါ ဘလျေစာရှကျပျေါက အခှနျတံဆိပျခေါငျး စုစုပေါငျး တနျဖိုးက ၁၀၀၀ ပဲရှိနတေယျဆိုရငျ ကြိနျးသပွေီ ၄၀၀၀ ဖိုး အခှနျရှောငျပွီပေါ့ ဟုတျ?
ဒါဆိုရငျ အခှနျရှောငျတဲ့ ဆိုငျက ရှောငျလိုကျတဲ့ အခှနျတနျကွေး ၄၀၀၀ အပွငျ ဒဏျကွေး ၄၀၀၀ ။ စုစုပေါငျး ၈၀၀၀ ဒဏျကွေး အတပျခံရမှာပါ။
ဒီ ၁၀၀% ဆိုတဲ့ ပမာဏအပွငျ အခှနျရှောငျတဲ့သူဟာ ဘဏ်ဍာရေး တဈနှဈအတှငျး ပကျြကှကျတဲ့ အကွိမျရအေလိုကျ ဒဏျကွေးတှလေညျး ဆောငျရဖို့ ရှိပါတယျ။
ပထမအကွိမျ အခှနျဆောငျဖို့ ပကျြကှကျတယျဆိုရငျ – ၂သိနျး
ဒုတိယအကွိမျ အခှနျဆောငျဖို့ ပကျြကှကျတယျဆိုရငျ – ၅ သိနျး
တတိယအကွိမျ အခှနျဆောငျဖို့ ပကျြကှကျတယျဆိုရငျ – ၇သိနျး နဲ့
တတိယအကွိမျနောကျပိုငျး အခှနျဆောငျဖို့ ပကျြကှကျမယျဆိုရငျ တဈကွိမျကို -၁၀ သိနျး နှုနျးစီ နဲ့ ဒဏျကွေးဆောငျကွရမှာပါ။
အဲ့တော့ အပျေါက အခှနျရှောငျတဲ့ ကိစ်စကို ပွနျပွောကွမယျဆိုရငျ အဲဒီဆိုငျက ခုမှ အတိုငျခံရတယျ ဆိုကွပါစို့.. ဒါဟာ သူ ပထမအကွိမျ အခှနျဆောငျဖို့ ပကျြကှကျတာမို့ အပိုဒဏျကွေး ၂သိနျး ထပျဆောငျရပါမယျ။ အဲ့တော့ စုစုပေါငျး အခှနျရှောငျတဲ့အတှကျ ဆောငျရတဲ့ ဒဏျကွေးက နှဈသိနျးရှဈထောငျ (၂၀၈၀၀၀)ပေါ့… (ဒုတိယအကွိမျဆိုရငျ ငါးသိနျး ရှဈထောငျဖွဈသှားမယျ၊ တတိယအကွိမျဆိုရငျ ခုနဈသိနျးရှဈထောငျ ဖွဈပွီး တတိယအကွိမျ နောကျပိုငျးဆိုရငျတော့ ၁၀သိနျး ၈ထောငျစီ ဖွဈသှားမှာပါ။) ဒီထိ နားလညျသေးတယျဟုတျ?
Related Article >>> ငှကွေေးစီမံမှု နယျပယျမှာ ယောငျးအတှကျ ဘယျလိုအလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှေ ရှိနိုငျလဲ။
အဲ.. အဲဒီမှာမှ ယောငျးက အခှနျရုံးကို သကျသအေထောကျအထားအပွညျ့အစုံနဲ့ တိုငျတဲ့သူဆိုပါစို့… ဥပဒအေရ ယောငျးတို့ ရရမယျ့ ဆုကွေး (ခံစားခှငျ့)တှေ ရှိနပေါတယျ။ ဆုကွေး ပမာဏက အခှနျရှောငျတဲ့သူ ဆောငျရတဲ့ ဒဏျကွေးရဲ့ ၁၀% ပါ။
အဲ့တော့ အပျေါက စားသောကျဆိုငျကိစ်စပျေါမှာပဲ ထပျတှကျကွညျ့ရအောငျ.. စားသောကျဆိုငျ ပေးလိုကျရတဲ့ ဒဏျငှကေ ၂၀၈၀၀၀ ဆိုရငျ ယောငျးရမယျ့ ပမာဏက ၂၀၈၀၀ ပါ။ တကယျလို့မြား ယောငျးက အခှနျရှောငျတဲ့ ဆိုငျတဈခုခုကို တိုငျခငျြတယျဆိုပါစို့.. အဲဒီဆိုငျရှိတဲ့ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျအခှနျရုံးတှမှော ဘလျေစာရှကျနဲ့အတူ သှားပွီး သတငျးပို့လို့ရပါတယျ။ သတငျးပေးသူဟာ ဘယျသူဖွဈတယျဆိုတာကို အစိုးရကိစ်စမှတဈပါး ဘယျသူမှ သိခှငျ့မရှိ၊ ဖျောပွခှငျ့ မရှိပါဘူး။ စိတျခလြကျခသြာ ပွေးတိုငျလိုကျပါ 😛 နောကျတာ နောကျတာ… 😀
ကဲ.. ဒါဆို နိုငျငံကွီးသား ပီသစှာနဲ့ပဲ အခှနျကို တိတိကကြ ဆောငျကွသလို အခှနျရှောငျတဲ့သူတှကေို လိုကျတိုငျ အဲလေ အခှနျရှောငျခွငျးကိုလညျး လကျမခံကွပါနဲ့လို့…
Tagged Commercial Tax, Knowledge, money, Penalty, tax
အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စများ (၃)
Posted on April 5, 2017 Author Christina Rosy
လိင်ဆက်ဆံစဉ် အမျိုးသားများပြုမူတတ်သည့် အမှားများဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ အချက်က အဆိုးဆုံးပါ။
Health Knowledge Relationships
Posted on September 4, 2017 Author Khine
ချစ်သူတွေကြားမှာ စိုးရိမ်မှုတွေ စိတ်မချတာတွေ များလာတဲ့အခါ နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်…
Posted on May 24, 2019 Author Yin Sandi Ko
မင်မင် ထင်မှတ်မထားတာတွေ များတာပဲ